संसारकै सबैभन्दा बढी अरबपति कहाँ छन् ?
एजेन्सी । तपाईं अरबपतिको सूचिमा कहिले सहभागी हुनुहुन्छ ? यसको जवाफ एउटा रिपोर्टमा भेट्टाउन सकिन्छ जसअनुसार तपाईंको यो सपना पूरा हुन तपाईंसँग ५० करोड डलरभन्दा धेरै सम्पत्ति हुनुपर्छ ।यदि तपाईंसँग यतिधेरै सम्पत्ति छ भने तपाई कहाँ रहन रुचाउनुहुन्छ ?
यसैलाई लिएर नाइट फ्रेंक एलएलपी एजेन्सी २००९ देखि थाहा पाउने प्रयास गरिरहेको छ । यो एजेन्सी १९८६ मा लण्डनमा स्थापना भएको रियल इस्टेट एजेन्सी र कन्सल्टेन्सी पनि हो ।
यस एजेन्सीले हालसालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार ५० करोड डलर सम्पत्ति हुने धेरै मानिस उत्तर अमेरिकी महाद्वीपमा बस्छन् र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी अमेरिका र क्यानडामा रहन्छन् । त्यहाँ रहने अरबपतिले कूल अरबपतिहरुको ३१.८ प्रतिशत आकार ओगट्छन् । त्यसपछि एसियामा २८.१ प्रतिशत र युरोपमा २५.४ प्रतिशत अरबपति बस्छन् ।
बाँकी १५ प्रतिशत मध्ये एसिया, अस्ट्रेलिया, रुस, राष्ट्रमण्डको स्वतन्त्र देश (सीआईएस), ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा बस्छन् । यो प्रतिवेदन बनाउनका लागि एजेन्सीले वेल्थ-एक्स नामको एक अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक कम्पनीसँग सूचना लिएको छ । उक्त तथ्यांक कम्पनीले कयौं लक्जरी ब्रान्ड, एनजिओ र शिक्षण कम्पनीसँग काम गर्दछ ।
त्यसैगरी संसारका ठूला ५०० बैंकमा भएका सर्वेका निचोडलाई पनि प्रतिवेदनमा तयार पार्नेक्रममा उपयोग गरिएको छ । ती ५०० बैंकहरु संसारका ५० हजार मानिससँग काम गर्छ जसको कूल सम्पत्ति ३ अरब डलर छ ।टप १० अरबपतिको दे यस रिपोर्टका अनुसार टप १० देशमा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, हङकङ, क्यानडा, स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, रुस, सिआईएस मुलुक र बेलायत आउँछन् ।वास्तवमा, अमेरिका र दोस्रो स्थानमा आउने चीनका अरबपतिको संख्यामा धेरै अन्तर छ । अमेरिकामा चीनमा भन्दा १,३४० अरबपति धेरै छन् । अमेरिकामा अरबपतिको संख्या १,८३० छ ।यो सूचिमा छिमेकी राष्ट्र भारतका पनि २०० अरबपतिहरु रहेछन् । उक्त संख्याले भारतलाई ११औं स्थानमा उभ्याएको छ । रिलायन्स उद्योगका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् ।सन् २०१६ र २०१७ को बीच अरबपतिहरुको संख्या सबैभन्दा धेरै हङकङमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ प्रतिशतले बढे । उता बेलायतमा भने ४ प्रतिशतले अरबपतिको संख्या घटेको छ । भारतको यो एक वर्षमा १८ प्रतिशत अरबपति बढेका छन् ।
अरबपतिहरुसँग सामान्यतः एकभन्दा धेरै घर, कम्पनि र सम्पत्ति रहने र संसारको धेरै ठाउँमा रहने पाइएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार जुन ५०० प्राइभेट बैंकर्ससँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो, उनीहरुसँग कम्तिमा ३ घरसँग अन्य अतिरिक्त आवास पनि रहेको बताएका थिए ।सबैभन्दा बढी घर एसिएन अरबपतिसँग रहेको पाइएको छ । उनीहरुसँग औसतरुपमा एकजनासँग चार घर हुन्छन् । सबैभन्दा कम घर हुने अरबपति अफ्रिकाका रहेछन् । उनीहरुसँग औसत २ घर रहेको बताएका थिए ।
यस्तै प्रायः अरबपतिसँग दुईभन्दा बढी देशको नागरिकता रहेको पाइएको छ ।यो रिपोर्टका अनुसार सबै रुसी बैंकका ग्राहकमध्ये ५८ प्रतिशतसँग दुई पासपोर्ट थिए । ४१ प्रतिशत ल्याटिन अमेरिकी र ३९ प्रतिशत मध्य एसियाली अरबपतिसँग दुई नागरिकता थिए ।सूचिमा को को छन्ना इट फ़्रेक एलएलपीको सूचि एकदमै छानिएको छ । यो सूचिमा २,२०८ यस्ता मानिस छन्, जसको सम्पत्ति १०० करोड डलरभन्दा बढी छ र फोर्ब्सको सूचिमा पनि उनीहरुले नै स्थान बनाएका छन् ।अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् ।उदाहरणको लागि, जेफ बेजोस, बिल गेट्स र वारेन बफेट, जो यस वर्षको फोर्ब्स सूचिमा सबैभन्दा माथि छन् ।
बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा-